မီးစက်အင်ဂျင်စက်များစက်ရုံ - China မီးစက်အင်ဂျင်ဆက်စပ်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ
ပိတ် solenoid ၏သတ်မှတ်ချက်
Model TDSS-12VDC TDSS-24VDC ဗို့အား 12V DC 24V DC ဆွဲပါ ၀ င်သည် 32.9A 21.9A လက်ရှိကိုင်ထား 0.60A 0.58A ဆွဲအင်အား 71.5N 77.9N Hold force 94N 129N
အမြန်နှုန်းတိုင်းတာခြင်းတွင်ဂီယာလည်ပတ်ခြင်းအတွက်အသုံးပြုခြင်းတည်ငြိမ်သောအချက်ပြမှု၊ လည်ပတ်မှုအပူချိန်၏ကျယ်ပြန့်မှု၊ သေးငယ်သောအရွယ်အစား၊ ရိုးရိုးတပ်ဆင်မှုစသည်တို့၏အားသာချက်များကိုပေါင်းစပ်ခြင်း။ ၎င်းသည်တိုင်းတာမှုအမျိုးမျိုးကိုဖုံးအုပ်ထားပြီးအမြန်နှုန်းသုညလည်ပတ်မှုကိုတိုင်းတာနိုင်သည်။ Plated Frequency range: 100-15000 Operating voltage: polarity protection နှင့်အတူ 8 ~ 32V Operating current: <50 mA လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအပူချိန်: -40 ~ 150 ° C Output signal: Sine wave Signal လုပ်ငန်းတာဝန်အချက် - ၄၇ ± ၅% Inductance အကွာအဝေး: 0.5 ~ ။ ..
အဓိကနည်းပညာဆိုင်ရာအချက်အလက်များ: ၁။ insulated ခံနိုင်ရည်ရှိမှု≥Ω20MΩ 2.Electric ပြင်းအား: 1500V / 1min 3.Ambient အပူချိန်: -40 ~ + 80 ° C 4. သတ်မှတ်ချက်： Model Power (W) Voltage (V) အချင်း (mm) LHM TDOH -150/220 100-150 12 I 24 I 110 I 220 160 120 M22 * 1.5BSP0.75 TDOH-300/220 200-300 12 I 24 I 110 I 220 220 180 BSP1 TDOH-650/220 500-650 24 / 110/220 240 200 200 M30 * 15 BSP1
ကွဲပြားခြားနားသောအင်ဂျင်ထိန်းချုပ်စက်များ၊ အောက်ဖော်ပြပါလက္ခဏာများနှင့်အဝေးကြည့်ကိရိယာများပါ ၀ င်သော ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးသည်။ အင်္ဂါရပ်များ - ၁။ အကာအကွယ်မျိုးစုံ ၂။ စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ခြင်းကြိမ်နှုန်းပြောင်းလဲခြင်းအမြန်နှုန်း ၃ ။ စိတ်ကြိုက် ၅။ ဒစ်ဂျစ်တယ်ပြွန်မျက်နှာပြင်တိုင်းတာမှု ၆။ အင်္ဂလိပ်နှင့်သင်္ကေတညွှန်ကြားချက်များ။ ၇။ Panel ခလုတ်ကိုချိန်ညှိခြင်းနှင့်စနစ်၏ parameters များကိုပြုပြင်ခြင်း Parameters: 1. Engine speed; 2. အင်ဂျင်ရေနံဖိအား 3. Eng ...